Potsero hanakanana azy: hita amin’ny bus ao Ozbekistan ny bokotra iadiana amin’ny fanohintohinana · Global Voices teny Malagasy
Miezaka mampahafantatra fisian'ny fanohintohinana am-pitateram-bahoaka mpikatroka
Voadika ny 13 Desambra 2021 8:05 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, عربي, українська, English
Bokotra “stop” ao amin'ny bus. Tompon'ny sary: Patrick Wuske ao amin'ny Flickr. (CC BY-NC 2.0).
Fisantarana andraikitra iray avy amin'ny FTMF (mpandala ny) zon'ny vehivavy ao Ozbekistan nokendrena haminganana ny fanohintohinana atao amin'ny vehivavy ao amin'ny fitateram-bahoaka, ao anatin'ny ezaka hanentanan'ny Firenena Mikambana iadiana amin'ny herisetra.
Hita ao amin'ny bus ao an-drenivohitra Tashkent ankehitriny ny bokotra manokana mampilaza amin'ny mpamily ny mety ho fisian'ny fihetsika diso toerana ao anatiny. Raha vao maneno ny fanairana iadiana amin'ny fanohintohinana dia hiantso ny manampahefana ny mpamily hanao famotorana amin'ny tranga.
Natomboka tamin'ny 25 novambra, andro iraisampirenena hamongorana ny herisetra atao amin'ny vehivavy, ny fanentanana, ho ao anatin'ny fisantarana andraikitry ny 16 andro ikatrohana ao amin'ny Firenena Mikambana, izay natao hampahafantarana ny fisian'ny herisetra mifototra amin'ny fananahana.
Nahavita fifanarahana tamin'ny kompaniam-pitaterana Toshshahartransxizmat ao an-toerana ny mpikatroka avy ao amin'ny FTMF Sarpa sy ireo fikambanana hafa hametraka ny bokotra sy hanome toerana hampielezana ny torohay.
Ny azo marihana aloha dia mety hiatrika fandoavana onitra noho ny “fanompana” fotsiny izay izay mpanao fanohintohinana satria tsy manaiky ny fanohintohinana ho asa mahavoasazy ny rafi-dalàna ao Ozbekistan.
Nilaza ny mpikatroka ao amin'ny Sarpa tao amin'ny ranty Instagram iray fa mbola mitoetra ho olana ny banga eo amin'ny fanovan-dalàna.
Hiasa ve ny bokotra? Efa misy bokotra aloha ny bus hisian'ny fiatoana noho ny voina, izay tsy niasa mihitsy. Raha mbola tsy heverina ho heloka ny fanohintohinana, dia mahatsapa ho tsy arovan'ny lalàna izahay. Mbola eo ihany koa ny hoe mbola tsy ampy ny hery hanatrarana ny bokotra.
Efa nanao ny asany ny mpikatroka tamin'ny lazaina ho fanentanana Frotterizm (avy amin'ny teny frantsay frotter, “manakasokasoka”, izay lasa fomba fiteny rehefa misy ny fanohintohinana ao amin'ny fitateram-bahoaka). Natao niaraka tamin'ny fanohanan'ny Mashav, sampan-draharaha fanampiana avy amin'ny governemantan'i Israely, nandalo ny masoivoho Israelita ao Tashkent, izao ezaka fanentanana izao.
Nandritra ny fitsapan-kevitra fampahafantarana momba ny fanohintohinana sy ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy/vavy, sahabo ho 20 isanjaton'ny nanontaniana no tsy mino fa hosaziana izay manohintohina, izay miteraka lonilony sy manakivy tsy hitady vonjy. Manantena ny mpikatroka fa hampisy fanairana ny fanentanana ka hahatonga ny governemanta hihetsika.
Mizarazara ihany ny hevitra anjotra taorian'ny fandrenesana ny vaovao. Tamin'ny fanehoan-kevitra tamin'ny ranty Instagram, naniry ny mpisera iray mba ho maro kokoa ny toerana ahitana ireny bokotra ireny: “Raha mba misy [ireny bokotra ireny] koa moa ao amin'ny metro.”
Misy ireo mpisera nanolotra vahaolana mba hosarahana ny lahy sy ny vavy any amin'ny fitateram-bahoaka: “Ho tapitra hatreo ny fanohintohinana ato amin'ity firenena ity rehefa hasiana ny bus sy metro ho an'ny vehivavy.” “Mila toerana ho an'ny vehivavy, tahaka ny any Dubai, izahay.”
Tahotra lehibe indrindra eo amin'ny samy mpaneho hevitra amin'ny media sosialy anefa ny mety ho fampiasana amin'ny tsy izy ny bokotra ka ho very hasina ny anjara andraikiny.
Tena zava-pitranga ao an-drenivohitr'i Ozbekistan tokoa ity olan'ny fanohintohinana ao amin'ny fitateram-bahoaka ity. Manodidina ny 60 isanjaton'ny namaly fitsapan-kevitra no nilaza fa efa tratran'ny fanohintohinana ry zareo tanaty bus na metro. Ary mariho ao anatin'izany fa na lahy na vavy dia samy tratran'izany avokoa.
Tao amin'ny fitsapan-kevitra ihany koa dia nanontany ireo mpamaly ny mpikatroka raha mahalala fepetra ry zareo hisorohana na hanoherana ny fanohintohinana ka namaly “tsia” ny tokony ho 93 isanjaton'izy ireo.
Vitsy sady tsy mahomby amin'ny ankapobeny ny lalàna isorohana ny fanohintohinana sy ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy/vavy ao Ozbekistan. Ny lasibatra amin'ny ankapobeny no tondroin'ny kolontsaina sy ny fomba nentin-drazana rehefa misy ny herisetra an-tokantrano sy ny daroka.
Mety hampisy fanairana momba ity raharaha ity ny fanentanana Frotterizm, saingy eo amin'ny governemanta sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ny onus amin'ny fanilihana sy hanoherana amin'ny fomba mahomby ny fanohintohinana sy ny herisetra.